Urdolls 'Return na nkwụghachi amụma
Ọ bụrụ na ngwaahịa a ga -eweghachi ma ọ bụ gbanwere nwere nkwarụ mbụ: n'ime ụbọchị atọ ka ị natasịrị ngwaahịa a, biko kpọtụrụ anyị: service@urdolls.com, anyị ga -eji ngwaahịa ọhụrụ dochie ngwaahịa mbụ ahụ nwere nkwarụ, ma ọ bụ anyị ga -akwụghachi gị. Ị nwere ike weghachite ihe naanị n'ọnọdụ mbụ ha. Na mgbakwunye, biko eweghachila ngwongwo na -enweghị amamọkwa.
* (Biko tinye foto nke ngwaahịa ntụpọ.)
Biko lelee anya n'okpuru
Ihe enwere ike weghachite ma ọ bụ dochie anya ya:
1. Ihe ndị mebiri n’ihi njem ma ọ bụ mmetọ
2. Ọ bụrụ na ihe ndị ị nwetara dị iche na email nkwenye
Ihe ndị enweghị ike iweghachite ma ọ bụ dochie anya:
1. Ọ bụrụ na ihe (agba / nha) gbanwere ma ọ bụ weghachite maka ọdịmma nke onye ahịa.
2. Ngwaahịa nwere ntụpọ dịka ọkọ ma ọ bụ mmebi kpatara ọrụ ndị ahịa.
3. Ngwaahịa ahụ mgbe wepụsịrị akara ngwaahịa.
4. Maka ngwongwo nyere iwu na mpụga weebụsaịtị a
5. Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ adịghị n’obodo ya, ọ bụ ngwaahịa ndị ahịa jiri.
Oge nnabata mgbanwe bụ ụbọchị 3 site na ụbọchị nnyefe ngwaahịa a
(Mgbanwe a na-ekpuchi "ngwaahịa ndị ejibeghi", biko biko lelee ha mgbe ị napụtara ngwaahịa ndị a.)
(1) Na ụkpụrụ, n'ihi ịdị mma ndị ahịa, anyị enweghị ike ịnakwere ịkagbu mgbe emechara iwu.
(2) Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkagbu n'ihi mmejọ arụ ọrụ, wdg, enwere ike ịme ya ozugbo itinye iwu ahụ.
(3) Nabata nkagbu nke ngwaahịa a tupu ebufee ya.
* Anyị ga-amalite nhazi nhazi n'ime awa iri abụọ na abụọ mgbe ị natara iwu ahụ, yabụ biko jide n'aka na iwu gị ziri ezi tupu ịpị bọtịnụ "Nyefee". Ọ bụrụ na anyị amalitela ịhazi iwu gị, mana ịchọrọ ịkagbu iwu ahụ, a ga-ebo gị ụgwọ 12% kagbuo. Ọ bụrụ na nwa bebi gị na-arụpụta ihe, mana ị ka chọrọ ịkagbu iwu a, a ga-ebo gị ụgwọ ịkwụsị ụgwọ 20%. Ọ bụrụ na anyị emecha nwa bebi gị mana ịmalitebeghị mbupu. Ọ bụrụ na ị sie ọnwụ kagbuo iwu ahụ, a ga-akwụ ụgwọ ego 30%. Ọ bụrụ na anyị ebubatala nwa bebi gị, ị gaghị enwe ike kagbuo iwu ahụ. Anyị enweghị ike icheta ngwugwu ahụ.
(4) Kagbuo ngwaahịa ahụ mgbe ị nyesịrị ya.
Ọ bụrụ na ebubatalarị ngwaahịa ahụ, enweghị ike ịkagbu iwu ahụ.
(A ga-arịọrịrị arịrịọ maka ịkagbu aha [tupu Mbupu].)